Monday, May 20th, 2019 - 13:41:44
Saturday November 03, 2018 - 22:07:07 in Wararka by Hussein Hadafow
Kooxda Man United ayaa 2-1 uga adkaatay kooxda Bounemouth oo ay u martisay waxaana goolasha u kala dhaliyay Martial iyo Rashford.
Kooxda Bournemouth ayaa marki u horaysay garoonkeeda looga adkaaday 7 kulan oo horyaaka ah, 4 guul ayay gaartay halka 2 barbao ay gashay , waxaanaguuldarro ugu dambaysay April2018 kolkaas oo ay isla Man United2-0 uga adkaatay.
Man United, Arsenal iyo Leicester City ayaa noqday saddaxda koox ee soo kabasho wanaagsan sameeyay iyagoo gool lagu leeyahay dhibco badan keensaday waxayna heleen 7 dhibcood.
Man United kaliya hal kulan ayaan gool laga dhalin xili ciyaareedkan11 kulan oo ay horyaalka ka ciyaartay,waxaana laga dhaliyay 18 gool, xilli ciyaareedki hore xillgan oo kale 8 kulan ayaan shabaqooda la taaban.
Mourinho ayaa laga adkaan21 kulan uu horyaalka kula kulmaymacallimiinta dalka Ingiriiska u dhalatay, waxayna United badisay 17 kulan halak ay 4 barbaro heshay.
Stanislas oo kooxda Bounemouth ka tirsan ayaa ku lugyeesahay 4 gool shanty kulan ee ud ambaysay kooxdiisa 3 gool iyo hal caawin.
Rashford ayaa dhaliyay 2 gool daqiiqadda 90-aad kuwaas oo ay kooxdiisa guul ku heshay kulamada horyaalka ah, mana jiro ciyaaryahan kaga badan, waxuuna la simman yahay Paul Scholes iyo Robin van Persie).